Dowladda oo Caddeysay Mowqifkeeda Shirarka Beydhabo (War-murtiyeed) « AYAAMO TV
Dowladda oo Caddeysay Mowqifkeeda Shirarka Beydhabo (War-murtiyeed)
989 Views Date March 3rd, 2014 time 1:04 pm
DOWLADDA FEDERAALKA AH EE SOOMAALIYEED WASAARADDA ARRIMAHA GUDAHA IYO FEDERAALKA WAR MURTIYEED Wasaaradda Arimaha Gudaha iyo Federaalka waxay u xilsaarantahay hirgelinta iyo taabagelinta Federaalaynta dalka si waafaqsan Dastuurka iyo shuruucda maamul-usamaynta gobolada iyo degmooyinka dalka.
Sidoo kale, waxay u xilsaaran tahay kahor tegidda khalalaasa siyaasadeed oo dhalin kara iska hor imaad bulsho.Waxaa xusid mudan in mudooyinkan dambe ay magaaladda Baydhabo ee Gobolka Bay ka socdaan shirar xambaarsan fikrado iska soo horjeedo, kuwaas oo uu mid waliba sheeganayo dhisidda Maamul Goboleed ay yeeshaan degaanadaasi.
Hadaba Xukuumaddu waxay wal-¬wal ka muujinaysaa habka ay u socdaan shirarkaas iyo dhibaatada ka imaankarta natiijada dhamaadka shirarkaas iska soo horjeeda.
Dawladda Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyada oo ka duuleysa mas’uuliyada ka saran maamul u sameynta iyo federaaleynta dalka waxay dhawr jeer isku taxaluujisay in ay midayso shirarkaas iska soo horjeeda,si shacabka degaankaas ay u helaan maamul midaysan oo waafaqsan Dastuurka iyo
Shuruucda dalka u yaala.
Hadaba, Wasaaraddu waxay halkan ku caddaynaysaa moowqifka siyaasadeed ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku aadan qaabka loo marayo dhismaha Maamul-Goboleed ay yeeshaan goboladaas , iyadoo latixgelinayo waaqiciga siyaasadeed ee haatan ka jira degaanadaas.
1. Wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa dhammaan siyaasiinta iyo cuqaasha dhaqanka ee dalka in ay ku baraarugsanaadaan maamul u samaynta Goboladda, Degmooyinka iyo Maamul Goboleedyadasi waafaqsan Dastuurka iyo Shuruucda Dalka.
2.Xukuumaddu waxay dhawraysaa heshiiskii lagu gaaray Addis Ababa,Ethiopia ee lagu ogolaaday dhismaha Maamulka Ku¬‐Meelgaarka ah ee Jubba.
3.Xukuumaddu waxay beegsanaysaa ku dhaqanka heshiiska Addis Ababa ee kor ku xusan.
Sidoo kale, wixii tabasho ah ee ku saabsan heshiiskan Xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda ka geeysato.
4.Xukuumaddu waxay diyaar u tahay in ay gacan ka geeysato dhismaha Maamul Goboleedka sedexda gobol ee Goboladda Bay, Bakool iyo Shabeeladda Hoose.
5.Wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaas in ay ka fogaadaan wax walba oo dhalin kara xasilooni daro ku timaada degaankaas.